Xuska 15sano Guurada Puntalnd oo Caawa ka dhacday Madaxtooyada Puntland ee Garoowe – SBC
Xuska 15sano Guurada Puntalnd oo Caawa ka dhacday Madaxtooyada Puntland ee Garoowe
Posted by Webmaster on August 1, 2013 Comments
Waxaa xarunta dowlada Puntland ee Garowe ka socda xaflad si wayn looga soo shaqeeyay oo lagu maamusayo,Sanadguurada 15naad ee Puntland.
Hadii aan xuso dadka kasoo qayb galay,waxaa ugu horeeya madaxwaynaha Dowlada Puntland Dr.Cabdiraxmaan Shiikh Maxamad Faroole, ku xigeenkiisa Gen.Cabdisamad Cali Shire,Gudoomiyaha Baarlamaanka Cabdirashiid Maxamad Xirsi,Gollayaasha dowlada,Isimo,waxgarad,Culimo,Saraakiil ka socda UNDP,dadwayne faro badan oo iskugu jira haween iyo dumar.
Xaflada waxaa aayadaha qur’aanka ku furay wasiir ku xigeenka cadaalada,diinta iyo arrimaha dhaqan celinta wuxuna sheegay inay muhiim tahay in markasta cabsida alle la is xasuusiyo.
Ka dib Aayaha qur’aanka iyo qowlka Eebe ,waxaa goobta hadalka looga yeeray Labo Abwaan oo si qoto dheer uga hadlaya marxalada Puntland ay ku jirto iyo sida looga baahan yahay shacabka reer Puntland inay dhexda u xirtaan ka shaqaynta ammaanka iyo waliba caawinta ciidamada kala duwan ee Dowlada Puntland.
Maslaxa hadalka waxaa looga yeeray kooxda Waabari Puntland ee uu hogaaminayo Abwaan Cabdiqaadir Shube,waxayna goobta kasoo bandhigeen Riwaayad aad ay u jeclaysteen dadka kasoo qayb galay,waxayna ka hadlayaa arimaha Puntland ay soo martay,iyo sida ay dowlada Puntland uga shaqaysay ammaanka iyo midnimada Somaliweyn.
Waxaa iyana goobta ka hadlay oo soo bandhigay waxqabadkoodii qar k amid ah wasaaradaha xukuumada Puntland sida wasaarada Caafimaadka Waxbarashada Haweenka iyo warfaafinta/qorsheynta,
Isimada ayaa iyaguna goobta kaga hambaleeyay Dhamaan Umada Reer Puntland waxayna u rajeeyeen sanadkan kiisa kale ay ku gaaraan barwaaqo horumar iyo nabadgeliyo .
Gudoomiyaha baarlamanka Puntland C/rishiid Maxamed Xirsi ayaa lagu soo dhaweeyay Microphone-ka waxaanu hambalyo uu u diray bulshada reer Puntland ka dib ka hadlay arimo dhowr ah isagoona ku soo dhaweeyay madaxweynaha Puntland Dr C/raxmaan Maxamed Maxamuud Faroole.
Madaxweynaha ayaa jeediyay Qudbad dheer oo uu dhicyo aad u farabadan kaga hadlay, waxaana ka mid ahaa dhinacyada siyaasada, Amaanka, Horumarka iyo weliba joojinta nidaamkii xisbiyada iyo sida ay ugu hanweyneyd Puntland.
Waxa uu madaxweynuhu tibaaxay in Puntland ay ku guul dareysatay nasiib darona ay ka soo wajahday u gudbida nidaamka dimuqraadiyeed, waxaanu ka sheekeeyay madaxweynuhu bilow ilaa dhamaad dadaalkii ay xukuumadiisa u gashay sidii ay nidaamka dimuqraadiyada ugu soo dabaali laheyd Puntland.
Waxa uu sheegay madaxweyne Faroole in howshaas xisbiyada oo ay mareyso heer aad u wanaagsan ay ka soo dhexgaleen dad uu ku tilmaamay qaswadayaal, ayna qeybo badan oo Puntland ka tirsani ka dhaceen shaqaaqado lagu carqaladeynayay taas oo ugu dambeyntii sababtay in ay joogsadaan dadaaladii Dimuqraadiyada.
Dhinacayada dhaqaalaha iyo waxyaabihii uga qabsoomay dowladiisa ayuu sidoo kale ku dheeraaday madaxweynaha inkastoo uu ku tilmaamay guul horumarka balaaran ee ay Puntland ka gaartay dhinacyo badan oo dhan dhaqaale iyo Horumarineed isugu jira.
Dhageyso Qudbada Madaxweyne FarooleRIIX AMA DAAR